I-attic enombono we-panoramic
Rota d'Imagna, Bergamo, i-Italy
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Ilze
Isici esiveziwe semishayo, izikhala ezinkulu zangaphakathi kanye nesimo esimaphakathi kwenza leli gumbi elingaphansi libe liyigugu langempela. Amakamelo amabili okulala angakwazi ukuhlalisa izivakashi ezifika kwezi-4 (abadala abangu-2 + izingane ezingu-2), kuyilapho ikhishi elikhulu lilungele ukupheka izitsha zakho ozithandayo. I-balcony yangasese inikeza umbono omangalisayo phezu kwesigodi.
- Amakamelo okulala amabili anombhede we-Queen Size, nelineni lombhede lifakiwe
- Igumbi lokugezela elineshawa, indlu yangasese, i-bidet, usinki omkhulu onesibuko, nefasitela. Amathawula okugeza athambile, umshini wokomisa izinwele, ijeli yeshawa nesipholile sezinwele. Umshini wokuwasha.
- Igumbi lokuhlala eline-TV yesikrini esiyisicaba, usofa onethezekile, netafula lokudlela.
- Ikhishi eline hob yegesi, ifriji elinefriji, umshini wokugeza izitsha, ihhavini ye-microwave, izitsha nezitsha, usawoti, upelepele, uviniga obhalsamu namafutha e-EVO. Umshini wekhofi we-Lavazza onama-pods athokomele.
- I-balcony ebheke isigodi netafula
- Ukushisisa okuguquguqukayo ngakunye kanye ne-air conditioning
- Isivinini esiphezulu se-WI-FI
INKONZO YABUSASASA (isithasiselo sika-€ 10 umuntu ngamunye ngosuku, azobhukhwa kusenesikhathi). Ubhasikidi ibhulakufesi ilethwa ngqo efulethini, futhi kuhlanganisa: itiye, ikhofi, croissants, amakhekhe okuzenzela, izithelo yogurt, okusanhlamvu, ubisi, ijusi yezithelo, isinkwa, inyama ebandayo noshizi, nutella, ujamu, amaqanda nezithelo ezisanda kukhiwa ezitholakala isizini.
IZINKONZO E-ROTA Apartments imizuzu eyi-10 ngezinyawo (ifakwe entengo):
- I-Heated INFINITY POOL enokubukwa kwe-panoramic kwesigodi, okufinyeleleka kusukela ekuqaleni kukaMeyi kuya ekupheleni kukaSepthemba, nama-sun loungers nama-parasol. I-swimming pool yabelwa ezinye izivakashi (ingqikithi yamafulethi angu-8), siqinisekisa izindawo zokuhlala nezambulela kuzo zonke izivakashi futhi sizibulale amagciwane ngemva kokusetshenziswa ngakunye. Amathawula okubhukuda anikeziwe, sincoma ukuthi uphathe iziliphu zakho.
- INDAWO YE-BARBECUE ene-gazebo netafula lokudlela labantu abangu-6. Sihlinzeka ngamalahle kanye namathuluzi okupheka, kukhona isithasiselo se-€ 10 sokusetshenziswa kwe-barbecue (yokuhlanza).
IZINKONZO E-"HOTEL RESORT NE-SPA MIRAMONTI" iminithi elingu-1 ngezinyawo
- Indawo yokudlela "Gritti" inikeza ukudla kwasendaweni endaweni enhle neyamukelekayo, enombono we-panoramic wesigodi. Vula ukudla kwasemini nedina nsuku zonke. Isevisi yokulethwa kwamahhala efulethini.
- "Isikhungo sezempilo se-"Bio Spa Caréra" esinechibi lokubhukuda elishisayo langaphakathi / langaphandle, i-panoramic sauna, ukugeza kwaseTurkey, izihlambi zezinzwa, indlela ye-Kneipp, amagumbi okuphumula nokunye okuningi. Ukungena 5h ngo-€ 25 umuntu ngamunye / Ukungena nge massage € 60 umuntu ngamunye.
Kwabiwe ngaphandle i-infinity iyashisa phezu kwesakhiwo i-pool
4.86(65 okushiwo abanye)
UIlze Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Rota d'Imagna namaphethelo